Headphones tsara indrindra hijerena sarimihetsika (Desambra 2020) - Accessories
Headphones tsara indrindra hijerena sarimihetsika (Desambra 2020)
Mety ho ezaka mampatahotra ny fanaparitahana ny habetsaky ny rafitry ny fahitalavitra na ny teatra an-trano. Ankehitriny, manify ny rindrina, ary raha manana olona ao amin'ny fianakaviana mipetraka ianao dia mety tsy ho tian'izy ireo ilay korontana. Matetika dia mety himenomenona ny mpiara-monina aminao koa. Ka ahoana no ahafahanao manafoana an'io olana io?
Tsotra! Makà headphone mety tsara amin'ny fijerena sarimihetsika! Tsy mitovy amin'ny headphones mahazatra ireo satria mitondra traikefa anaty sy feo manodidina anao ho an'ny kalitaon'ny feo mahafinaritra ianao. Matetika, ireo headphone ireo dia misy famoretana amin'ny feo na fanafoanana ny tabataba.
Ianao ve mitady telefaona tsara indrindra hijerena sinema? Dia mifarana eto ny fikarohana anao! Ity lisitra ity dia manampy anao hanapaka ny takiana amin'ny fandinihana lafin-javatra maro samihafa. Izahay dia mitondra hevitra momba anao, izay manenjika anao ary mitondra anao fanazavana marimaritra iraisana hahasoa anao.
Manana torolàlana mpividy sy FAQ izahay hanafoanana ny fisalasalanao momba ireo famoronana mamirapiratra ireo raha mila fanazavana fanampiny. Andao àry hanomboka!
Headphones tsara indrindra hijerena sary mihetsika - Picks Expert
1. COWIN E7 Mihetsiketsika amin'ny fanafoanana ny headphones
Manomboka eo ankavanan'ny ramanavy dia Cowin miaraka amina loko miloko mavitrika ho an'ny headphone. Afaka misafidy modely maro loko ianao mba hifanaraka amin'ny safidinao. Ho an'ny mpitia bass rehetra any, dia miaraka amin'ny rafitry ny bas manery ary manome kalitaon'ny feo avo lenta. Ny fakan-tsarimihetsika dia miaraka amin'ny teknolojia fanafoanana ny tabataba, izay midika fa hanomboka hampihena ny tabataba izy ireo mba hahazoana antoka fa mankafy ny feonao ianao rehefa ampiasaina.
Izy io dia manana padina rivotra proteinina handrakofana tsara ny sofinao. Toy ny hoditra ny volony, ary misy mivezivezy tsara. Na eo aza ny pads proteinina dia mbola headphone be loatra amin'ny sofina izay hanomboka tsy mahazo aina aorian'ny adiny 3. Ankoatr'izay, mahazo mikrô namboarina ianao hahafeno ny fepetra takian'ny fifandraisana. Mora ny fanaraha-maso ary mahazo fialamboly bitsika ianao noho ny fanamorana.
Ho an'ny fifandraisana, mahazo Bluetooth sy NFC ianao. Izy io dia miaraka amin'ny batterie 750 mAh mahery izay manome fampisehoana tsy tapaka mandritra ny 30 ora. Tsy mila miahiahy momba ny famatsiana herinaratra ianao. Na izany aza, maharitra adiny efatra vao voaloa. Ho fanampin'izay, mahazo antoka 18 volana miaraka amina serivisy fikarakarana mpanjifa mahatalanjona ianao.
30 ora maharitra miavaka
Fampisehoana bass mahafinaritra
Kalitaon'ny feo tsy misy tomika
Nampiasaina ny Bluetooth sy ny NFC
Mila adiny 4 vao andoavana vola
Tsy afaka manao akanjo mihoatra ny 3 ora
2. Artiste Wireless Headphones
Eto ianao dia manana headphone miaraka amin'ny teknolojia tsy misy tariby 2.4 GHz misy azy. Ny fakan-tsarimihetsika dia misy fitaovana fanampiny izay manome fifandraisana tsy azo ravana miaraka intelo amin'ny Bluetooth (hatramin'ny 100 ft) ho an'ny fahafahanao. Amin'izay dia ho mora aminao ny mandehandeha.
Tena iraisan'ny fifandraisana tokoa izany satria miaraka amin'ny AUX (3.5mm jack), RCA, fifandraisana optika ary fifandraisana Bluetooth tsy misy tariby. Azonao atao ny mampiasa azy amin'ny saika misy fitaovana tsy misy olana. Ny headphones dia mahatalanjona amin'ny fifandraisana nomerika miaraka amin'ny fanodikodinana 0,5% hanatanterahana ny fitakiana bass.
Ireo headphones ireo dia miaraka amin'ny maodely be loatra amin'ny sofina sy padding ahazoana aina hahafahana mampiasa be loatra. Ampifandraisinao amin'ny telefaona famandrihana ny headphones, izay vatana mampifandray ihany koa. Ny fahamoran'ny fiampangana dia tsy mitovy, ary manome 20 ora fampisehoana tsy an-kijanona isaky ny fiampangana.
Mora ny manangana miaraka amin'ny torolàlana momba ny boky sy torolàlana ho an'ny mpampiasa. Amin'ny ankapobeny, ny headphone dia tsara ho an'ny zavatra takinao ao an-trano ho an'ny traikefa amin'ny fialamboly sy ny fifandraisana amin'ny fahitalavitra. Na izany aza, tsy ampy ny fanohanan'ny Dolby DTS manan-danja hihaonana amin'ny feo maloto ao amin'io departemanta io.
Fifandraisana aux, Optical, RCA, ary fifandraisana Bluetooth
Fanaraha-maso herinaratra marani-tsaina sy fiampangana haingana (2 ora)
Tsy misy mijanona, tsy misy fanodikodinana intelo ny isan-karazany ny Bluetooth mahazatra
20 ora maharitra ny fampisehoana
Tsy manolotra be ho an'ny fanohanan'ny Dolby DTS
Tsy mety amin'ny fampiasana ivelany
Sennheiser dia fantatra amin'ny fananganana headphone adidy mavesatra ho an'ny fampisehoana maharitra. Ity lafiny ity dia nohamafisina bebe kokoa amin'ny fiantohana 2 taona an'ity headphone ity. Eto ianao dia mahazo fiankinan-doha amin'ny zava-bitan'i Sennheiser miaraka amina foibe famonoana zaza.
Ny tobim-piantsonana dia miasa toy ny singa iray hifandraisana amin'ny fahitalavitra, solosaina ary fitaovana hafa. Azonao atao ny mifandray amin'ny fampiasana jacks isan-karazany an'ny RCA. Ny tena zava-dehibe kokoa, ny onjam-peo dia manome fifandraisana Bluetooth miavaka hatramin'ny 300 metatra ny sakany raha tsy misy fanodikodinana na fahatapahana ho an'ny mazava.
Ny headphone dia famolavolana an-tsofina miaraka amin'ny vatana maivana. Izy io dia manome hatramin'ny 20 ora fampisehoana tsy an-kijanona amin'ny fiampangana tokana. Na izany aza, ny fiasa mahavariana indrindra amin'ity singa ity dia ny fifandraisana amin'ny telefaona hafa. Azonao atao ny mampifandray headphones RS 120 hafa amin'ilay singa tokana, midika izany fa olona marobe no afaka mankafy ny filma miaraka tsy manapoaka ny feon'ny fahitalavitrao!
Na dia mora aza ny mitahiry sy mampifandray, dia tsara ho an'ny mijery sarimihetsika anaty trano na efitrano. Tsy afaka mitondra izany amin'ny findainao ianao na aiza na aiza satria tsy dia mora vahininy. Tsy mifandray mivantana ny Bluetooth. Mila mampifandray ilay singa amin'ny analogy ho an'ilay fitaovana ianao.
Kalitaon'ny feo tsy misy tomika sy antoka 2 taona
Maivana ary ahazoana aina
Afaka mifandray amina headphones RS 120 marobe (amidy misaraka)
Fifaneraserana tsy misy tariby matanjaka (hatramin'ny 300 ft range)
Toeram-piantsenana azo alefa miaraka amina charger cradle
Ny singa afovoany dia tsy mifandray amin'ny alàlan'ny Bluetooth amin'ireo fitaovana hafa
Tsy safidy mora mandeha
4. PHILIPS Digital Wireless Headphones
Philips dia mitondra anao ny safidy farany ho an'ny rafitra fialamboly manokana ao an-trano miaraka amin'ireo headphone ireo. Miaraka amin'ny halavirana mahomby 30 metatra, androm-piainany mandritra ny 20 ora, ary fanohanan'ny jack 3.5 mm dia manana vondrona fialamboly feno ianao. Philips dia mamoaka feo famaritana avo lenta avo lenta an'ny studio, izay tsy manam-paharoa amin'ny indostria.
Ho an'ny traikefa sinema dia mahazo headphones malalaka ianao. Ny dock fiampangana dia lamaody sy marevaka mifanaraka amin'ny haingo maoderina. Izy io dia manana fanitsiana fihantona mandeha ho azy ho an'ny loha sy velaran-doha izay manome anao ny fampiononana lehibe indrindra. Izy io dia manana fiasa mandeha ho azy sy mandeha ho azy izay miasa rehefa apetrakao ny headphone ho an'ny fahafaha-misafidy anao. Ny tena zava-dehibe kokoa, tsy misy tara ny fifandraisana.
Ny kalitaon'ny feo mafonja sy ny feo malefaka dia sonian'ny Philips miaraka amin'ireo mpamiliny bass 30mm.Izy ity dia headphone maivana be dia be izay miasa tsara amin'ny rafitry ny fahitao. Ny docking station dia misy charger efa niorina, ary azonao atao ny manolo ny bateria rehefa mandeha ny fotoana mba hahombiazana tsara indrindra.
Raha mitady fakan-tsarimihetsika izay ahazoana aina mandritra ny ora maro ianao ary mitondra kalitao tsara feo, dia izany no safidy mety aminao. Amin'ny fifandraisana Jack, azonao atao ny mifandray tsy misy fanelingelenana. Izy io dia miasa tsara amin'ireo maodely amin'ny fahitalavitra rehetra.
Kalitaon'ny feo sy bass miavaka
Fitaovana sy fananganana ambaratonga voalohany
Fanitsiana mandeha ho azy ary mandeha / miala
Earphone jack raha lany ny bateria
Batterie azo soloina
Fifandraisana mahazatra, tsy misy zavatra manokana ao
5. Sony Wireless Headphones
Sony dia mijanona ho kilasy eran'izao tontolo izao ho headphone tsara indrindra hijerena sarimihetsika miaraka amin'ny fisian'ny rafitra feno. Izy io dia miaraka amin'ny dock izay ahafahanao manome ny headphones anao ary ny safidy fifandraisana mahazatra. Manomboka amin'ny takiana Bluetooth tsotra ka hatramin'ny tariby RCA an-tsekoly, ao anatin'izany ny AUX, dia mahazo rafitra fifandraisana feno ianao
Fiainana bateria roapolo ora ary hatramin'ny 150 metatra ny fifandraisana tsy azo tapahina dia miampy be. Mazava ho azy, satria vokatra Sony izy, manana fialamboly am-peo maro karazana ianao. Misy ny maody feo ary autotunes misy fifehezana boky. Mahazo ny fihenan'ny tabataba sy ny vokatra bass matanjaka miaraka amin'ny feo famaritana avo izay mety tsara.
Izy ity dia headphone fialam-boly hi-fi, koa raha te hiaina sinema amin'ny fampiononana ao an-tranonao ianao dia mpiara-miasa tonga lafatra ity. Mavesatra be ny headphones, miaraka amina fanitsiana mora hahazoana fampiononana tsy misy tohiny. Amin'ny ankapobeny, safidy headphone tena mahazatra izy io miaraka amin'ny mari-pamantarana marika an'ny Sony.
Safidy fampifandraisana marobe
Kalitaon'ny feo sy ny bas tsara
Dock sy rafitra famandrihana mahazatra
Antoka-azo antoka an'ny Sony
Takio ny fiantsonan'ny dock mba hiasa
Fandraisana an-tsarimihetsika an-trano mahazatra
6. Sennheiser RS ​​5000 Digital Wireless Headphone
Raha tsy tianao ny headphones ary maniry zavatra akaiky kokoa ny famolavolana ‘earphones’ ianao dia miverina Sennheiser miaraka amin'ny fanavaozana miavaka iray hafa. Ny RS 5000 dia fantatra amin'ny fanomezana 'plus' ho an'ny TV Entertainment. Voalohany indrindra, manana ny fahafaha-manao sy vatana maivana an-tariby amin'ny sofina izy izay mahatonga azy hahazo aina bebe kokoa noho ny headphone.
Mahazo ny kalitao audio tsy misy kilema miaraka amin'ny safidy fanamoriana bebe kokoa ianao. Marina izany! Misy piraofilina telo samihafa azo ampiasaina ho preset ho anao mba hisafidianana sy hahafenoana ny fitakiana audio anao. Tsy izany ihany. Azonao atao ny manamboatra ny famoahana feo amin'ny fifehezana volony havia sy havanana tsirairay mba hahamora kokoa.
Ny baiko nomeny feo dia toetran'ny kanto ary amina ligy hafa noho ny headphones rehetra ao amin'ilay lisitra. Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny mari-pamantarana ‘+’ ao amin'ny sofinao dia azonao atao ny manomboka ny baiko amin'ny teknolojia marani-tsaina hamaky tsara ny baikon'ny feonao amin'ny valiny tsara indrindra. Ankoatr'izay, manana endrika marevaka izy io ahafahanao mametraka ny dock main akaikin'ny fahitalavitra.
Ny ahatongavany sy ny fifandraisany dia mitovy amin'ny headphones hafa ao amin'ilay lisitra. Azonao apetaka amin'ny dock ho an'ny famandrihana izy io, ary ny fisorohana ny lozisialy mandeha ho azy dia manakana ny fandoavana be loatra. Araka izany dia azonao atao ny mitazona azy eo akaikin'ny tokonam-baravaranao izay mety ho eo akaikin'ny fahitalavitra ho mora idirana.
Ny tena zava-dehibe dia manana safidy mifandraika amin'ny finday avy amin'ny tariby optika, RCA, aux, ary maro hafa ianao hanome anao ny fialamboly faratampony. Ny fampisehoana feo, ny kalitaon'ny bas ary ny zavatra hafa rehetra dia manara-penitra ary manaraka ny teknolojia farany.
Famolavolana paikady ary mora apetraka mba hahamora ny mpampiasa
Smart control, mpamaky feo mahay
Azo ampifanarahana amin'ny mombamomba ny feo sy ny fanaraha-maso ny feony
Fahafaham-po amin'ny Earphone sy vatana maivana
Tsy tsara hitafy sy mandehandeha
Tsy fifandanjana kely amin'ny lanjany noho ny vatana ‘plus’ lehibe ho an'ny feo eo aloha
7. Sony RF400 Wireless Home Theater Headphones
Ianao ve mitady zavatra manaraka ny andalana ny headphones an-trano? Inona no tanjon'ireo? Mba hanomezana anao traikefa lalina amin'ny sarimihetsika misy kalitaon'ny feo madiodio, feo manodidina ary bass. Azontsika rehetra ekena fa mpisava lalana i Sony amin'ny famoahana traikefa amin'ny teatra an-trano, ary izany no azontsika amin'ity headphone teatra an-trano tsy misy tariby ity!
Miaraka amina mpamily feo 1,57 santimetatra dia mahazo famoretana mafy ianao ary famoahana feo avo famaritana. Ny fifandraisana tsy misy tomika dia manafoana ny fanodikodinana na static na dia mamono ny tabataba avy amin'ny manodidina aza. Mahazo fifandraisana 150 ft tsy azo tapahina ianao.
Izy io dia manana fanaraha-maso mora miaraka amin'ny slider ho an'ny volume, auto prompt, ary bokotra hafa natsangana teo anilan'ny headphones mba hahamora. Ny mpandray feo dia mangarahara sy marina. Na mitady streaming ny sarimihetsika ianao na mijery seho, dia mahazo fonon-tsofina ahazoana aina mandritra ny fotoana maharitra.
Ho fanampin'izay, manana androm-piainany 20 ora izy. Izy io dia manana endri-javatra ‘setup-and-forget”, izay ahafahanao mampifandray ilay dock amin'ny fahitalavitra. Ny headphones dia hifandray amin'ireo seranan-tsambo mandeha ho azy, ary ny tokonam-baravarana dia misy tohana famandrihana ho an'ny headphone anao. Na izany aza, tsy manana feo manodidina na fanohanana nomerika Dolby izy io.
Famoahana feo sy kalitao tsy manam-paharoa amin'ny fialamboly manokana
Dock mahazatra, fifandraisana ary maodely
Fanaraha-maso mora amin'ny headphone
Tsy misy safidy amin'ny feo manodidina
Tsy misy fanohanana Dolby Digital
8. COWIN E8 Mihetsiketsika amin'ny fanafoanana ny headphones
Niverina tao anaty lisitra i Cowin niaraka tamin'ny headphone mahafinaritra-mahaliana ho an'ny fialamboly. Na izany aza, ity iray ity dia misy fanapahana kely amin'ny bateria, manolotra 20 ora, miaraka amin'ny vatana matevina kokoa ho an'ny fikirakirana matanjaka! Ny fanafoanana ny tabataba mahery vaika dia midika fa azonao atao ny mampiasa an'ireny headphone ireny na aiza na aiza alehanao.
Miaraka amin'ny fanafoanana ny feo dia manana kalitaon'ny feo miavaka ianao. Raha ampitahaina, afaka manome hatramin'ny 25% feo tsara kokoa miaraka amina feo malefaka noho ny hafa ao anaty lisitra. Miharihary amin'ireo mpamily herinaratra 100dB ao aminy. Ny tadin'ny sofina malefaka dia tsara kokoa miaraka amin'ny fihodinan'ny 90 degre mba hifanaraka tsara arakaraka ny haben'ny lohanao sy ny fihetsinao. Ny fitrohana andriamby dia manadino ny kilasy.
Manana Bluetooth mifanentana amin'ny ankamaroan'ny fitaovana ianao hampifandraisana, na ny findainao, ny tele, na ny findainao. Izy io dia miaraka amin'ny mikrô natsangana hahafeno ny fepetra takian'ny fifandraisana. Inona koa? Misy ny fanaraha-maso ny habetsahana, ny skip ary ny rewind dia tafiditra ao ihany koa ho fanamorana bebe kokoa.
Raha mifanaraka amin'ny laoniny, ny androm-piainan'ny bateria kely kokoa (20 ora) dia mampihena ny haben'ny bateria sy ny lanjan'ny headphones amin'ny ankapobeny. Mbola mahazo 18 volana fiantohana miavaka sy serivisy fikarakarana mpanjifa miavaka ianao hamaly ny takinao. Raha tena headphone azo ilainao tokoa io dia ity no tsara indrindra azonao.
Fifandraisana Bluetooth miovaova
Travel-friendly sy maivana
Fiainana bateria mandritra ny 20 ora, jack earphone raha lany ny baterinao
Kalitaon'ny feo miavaka
Fakan-tsarimihetsika tsy misy tetibola tsara
Fiainana bateria kely kokoa noho ny headphones mahazatra Cowin
Mbola endrika mavesatra kely ihany
Ny lisitry ny mpividy ho an'ny headphones tsara indrindra amin'ny fijerena sarimihetsika:
Ny fiheverana voalohany tokony hataonao dia ny karazana headphone azonao. Misy maodely roa azo eny an-tsena.
Over the Ear Headphones:
Manarona ny sofinao tanteraka ireo ary manaporofo fa ilaina amin'ny fanafoanana ny tabataba manodidina. Noho izany dia manafoana ny feo ivelany izy mba hanome feo tsy miato ho an'ny sofinao. Mandritra ny maodelin'ny sofina, ny ankamaroan'ny fotoana dia tsara ho an'ny fialamboly manokana izay tsy tianao fanakorontanana.
Na izany aza, mazàna tsy ampy rivotra izy ireo. Izany dia mitarika fiakarana hafanana sy hatsembohana manodidina ny sofinao, izay mety tsy mahazo aina. Mety mila mandinika ny haben'ny headphone ianao hahazoana antoka fa mifanaraka tsara amin'ny sofinao izany. Raha tsy izany dia mety hiteraka tsy fahazoana aina.
Headphone amin'ny sofina:
Mifanaraka amin'ny sofinao ireo, miaraka amina unusillant izay mampahazo aina ny sofinao. Amin'ny rivotra mety, azonao atao ny mitafy azy ireo mandritra ny fotoana lava tianao, ary tsy misy ny mahazo aina amin'ny fampidirana sofina.
Ireo sofina an-tsofina an-tsofina dia mazàna mora volo-mandeha sy maivana ho anao hitondra mora foana. Na izany aza, tsy manome fanafoanana ny tabataba mahomby izy ireo.
Rehefa avy nanapa-kevitra ny amin'izay karazana headphones mety indrindra aminao ianao dia izao no fotoana hifindranao amin'ny fandinihana lalina kokoa.
Headphones maoderina dia miaraka amin'ny safidin'ny fifandraisana. Mahazo safidy jack na USB mahazatra ianao. Ny ankamaroan'ny headphones maoderina dia manana fifandraisana Bluetooth amin'ny androm-piainany. Tonga miaraka amina vintana jack izy ireo raha lany ny baterinao. Manaporofo izany fa endri-javatra mety.
Raha mahazo headphone mandeha amin'ny bateria ianao dia diniho fatratra hoe hafiriana no hitantanana azy. Toy izany koa, zahao ny ora fahombiazana omeny. Ny fomba ahafahanao mameno ny headphone dia tokony hodinihina ihany koa.
Tsara kokoa raha mahazo écouteur miaraka amin'ny fifanarahan'ny rehetra ianao. Saika ny fitaovana rehetra amin'izao fotoana izao dia afaka mifandray amin'ny headphones. Mety ho finday, laptop, PC, na fahitalavitra. Tokony hahazo headphone mifanentana be amin'ny hetsika samihafa ianao amin'ity vanim-potoana revolisiona teknolojia ity, ao anatin'izany ny filalaovana.
Zahao ny fihenan'ny herinaratra sy ny herinaratra mety ao amin'ny headphones. Ny fitaovana samihafa dia manana fivoahan'ny herinaratra samihafa. Ny headphones sasany dia mety misy jack jack universal, fa tsy midika izany fa azonao ampiasaina amin'ny toerana rehetra. Ny fikorianan'ny herinaratra tafahoatra dia hanimba tsikelikely ny earphone anao. Mety hahatonga anao handrehitra herinaratra aza. Mba hilamin-tsaina dia mahazoa headphones mety.
Fanamorana ny fanaraha-maso:
Ho an'ny mahamety anao, ny orinasa dia mampiditra fanaraha-maso ivelany ho an'ny headphone anao. Safidy default iray no hifehezana ny volavola. Na izany aza, maro ny headphones manana baiko fanampiny, toy ny lalao sy fiatoana. Ny sasany dia manana safidy hanova ny lalana na hanafainganana, mitovy amin'ny rafi-mozika taloha sy ny mpandeha an-tongotra.
Ankoatr'izay, ny mic dia tafiditra amin'ny ankamaroan'ny headphone rehetra hahafeno ny fepetra takian'ny fifandraisana. Amin'ity tranga ity, ny headphone dia mety manana safidy handray na hanafoana ny antso. Ny fisian'ireto endri-javatra ireto dia tsy ny zava-dehibe ihany. Ny fomba fampidirana ireo bokotra ireo amin'ny maodely dia zava-dehibe ihany koa.
Ireo fanaraha-maso ireo dia tokony ho mora ampiasaina ary manavaka mba tsy hampifangaro anao. Headphones maro no tonga miaraka amin'ny baikon'ny feo ary maika izao, indrindra ho an'ny headphones an-trano. Ka zahao izy ireo.
Volavola sy fitaovana:
Diniho ny fampiasana ny headphone anao ary avy eo mandiniha ny fananganana. Mety ho tsara kokoa raha manana telefaona maharitra ianao izay mahazaka hatairana. Ny headphone dia iray amin'ireo fitaovana mora milatsaka.
Ankoatr'izay, ny mety tsara dia mety ho safidy tsara tadiavina. Headphones marobe no miaraka amin'ny vatana azo ovaina hahatratra ny lohanao sy hamatotra mafy ny lohanao. Ny fihazonana, karazana fitaovana ho an'ny sofina sofina, ary ny kalitaon'ny fitaovana dia hanana anjara toerana lehibe amin'ny faharetan'ny headphones anao.
Fanafoanana ny tabataba na famoretana:
Hamarino tsara ny fahasamihafana misy eo amin'ny lafiny roa. Tsy dia misy headphones matetika izay mampanantena ny fanafoanana ny tabataba. Ny ankamaroan'izy ireo dia tonga miaraka amina fanamafisana ny tabataba. Na izany aza, ankoatry ny fakan-tsofina an-tsofina sy sofina an-doha dia mety ho fandinihana mety izany.
Ny headphone manafoana tabataba mazàna dia manana singa fanampiny hanohitra ny feo ivelany sy hanafoanana ny tabataba hahafahanao mankafy ny feo. Na izany aza, ny headphone fanindronana dia hampihena ny feo amin'ny ondana sy vatana mba tsy hanakorontanana.
Ny headphones sasany dia tsy misy mifanentana amin'ny Dolby Digital. Na dia tsy laharam-pahamehana aza izany, ny fanohanan'i Dolby dia mety ho tafiditra amin'ny fanamboarana bebe kokoa ny kalitaon'ny feo sy ny vokatra. Betsaka ny olona maniry bass, fa ny headphones sasany tsy manana mpamily bass. Aza afangaro ny feo manodidina an'i Dolby Digital; samy hafa izy roa ary mitaky fandinihana manokana.
Ny ankamaroan'ny headphones ao anaty lisitra dia manana rafitra dock. Izy io dia ahafahan'ny telefaona an-tariby hifandray amin'ny fahitalavitra sy ireo fitaovana matanjaka hafa. Hamarino fa maharitra ny vondrona docking anao, satria maro ny mpanamboatra tsy mifantoka amin'ny fahamendrehan'ilay fitaovana. Tokony hanana safidy mavesatra sy fanohanana an-tsehatra analogie ho an'ny fifandraisana feno.
Raha manana mpikambana marobe ianao, dia ny dock izay manohana headphone marobe dia tsara kokoa raha miara-mankafy sarimihetsika ianao nefa tsy miantehitra amin'ny fivoahan'ny feo amin'ny fahitalavitra.
Fitaovana hafa hodinihina:
Ity misy lisitr'ireo zavatra hafa azonao raisina mandritra ny fisafidianana headphone anao:
Fanohanana Equalizer ahafahana manaingo ny kalitaon'ny feo mifanaraka amin'ny zavatra takinao.
Ny kalitaon'ny feo sy ny fivoahana no tokony hojerena. HD Ny fanohanana Sound dia tena ilaina amin'ny tontolo ankehitriny.
Raha tianao ny bas, dia misy headphones miaraka amin'ny fanohanan'ny bass.
Mety ho mora ny fanitsiana sy ny fanamafisam-peo
Ny fisorohana ny tohotra, ny porofo momba ny rano ary ny toetr'andro dia mety hampitombo ny fiainany
Ny Warranty na ny fiantohana dia mety hahasoa, indrindra ho an'ny headphones avo lenta.
F: Ahoana no mampiavaka ny fanafoanana ny tabataba mavitrika noho ny fanafoanana ny tabataba?
TO:Ny fanafoanana ny tabataba mavitrika dia mazàna misy singa fanampiny ao amin'ny headphone. Rehefa mametaka sy milalao headphones ianao dia mihetsika ireo singa ireo. Ny sasany dia manana isan-jato isan-jato ny famolavolana noforoniny. Ny hafa kosa manana fihozongozona hanoherana ny tabataba any ivelany. Mandritra izany fotoana izany, ny fanafoanana ny tabataba mahazatra dia miankina amin'ny ondana sy fitaovana fanaovan-tsofin-doha mba hampihenana na hanafoanana ny tabataba.
F: Mety ve ny mitafy ny headphone anao imasom-bahoaka?
TO:Misy telefaona an-kalamanjana fitsangatsanganana azonao zahana na entinao imasom-bahoaka. Na izany aza, hafa ny fanamafisam-peo ho an'ny sarimihetsika na ny trano fandraisam-bahiny. Izy ireo dia mitondra anao fahombiazana tsara kokoa amin'ny fampiononana ao an-tranonao. Ergo, mety hanelingelina anao mora foana amin'ny besinimaro izy ireo izay mety hiteraka korontana. Aleo tsy manao headphone ‘homethreate’ imasom-bahoaka.
F: Azonao atao ve ny mampifandray ny headphones miaraka amin'ny dock mivantana amin'ny alàlan'i Jack?
TO:Ny headphones izay misy gara dia mazàna tsy manana jack earphone na safidy fampidirana aux raha hampifandray mivantana. Raha tsy izany, ny safidy jack dia ho hita ao amin'ny dokotera mba hidiranao. Izany dia hahafahanao mampifandray ny dock anao amin'ny fitaovana rehetra. Na izany aza, ny dock sy ny headphones dia mifandray indrindra amin'ny alàlan'ny fifandraisana voafetra Bluetooth.
F: Afaka mampiasa Bluetooth hampifandray mivantana ny headphone tsy misy dock ve ianao?
TO:Miankina amin'ny maodely sy ny endriny izany. Ny headphones sasany dia manana safidy hifandray mivantana amin'ny fitaovana hafa nefa tsy mila dock. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia mila dock ianao mba hiarovana ny headphones an-trano. Izy io dia misoroka ny mety tsy fahatomombanana ary manome fifandraisana tsara kokoa.
Tsy ny fitaovana rehetra no manana famoahana feo miavaka. Ny sasany amin'izy ireo dia mila teatra an-trano. Na izany aza, eo amin'ny tontolon'izao tontolo izao dia nanjary korontana ny teatra an-trano. Raha be fiheverana ny mpifanolobodirindrina aminao na olona ao amin'ny fianakavianao ianao dia tokony handinika an'ireny headphone ireny.
Hamarino tsara fa mahasahana karazana isan-karazanyheadphone tsara indrindra hijerena sarimihetsikamiainga amin'ny safidin'ny teti-bola hatramin'ny lohahevitra miloko marobe, ary marika lehibe hanampiana anao hahazo ny headphones tsara indrindra hijerena sarimihetsika! Aza avela hisy hanakana anao, indrindra tsy ny fikorontanana na ny fifandraisana, miaraka amin'ireto headphone matanjaka ireto.
Voamarina ve i Dororo Season 2? Daty famoahana, Spoilers & Fanavaozana
Dead to Me Season 3 Daty famoahana: Rahoviana no ho voalohany?
ny fomba hahazoana roblox maimaim-poana
mandefa avy amin'ny solosaina finday mankany chromecast
mijery sarimihetsika hd maimaim-poana amin'ny streaming an-tserasera
akatony indray mandeha ny iphone rehetra
Ahoana ny fomba hijerena ny chat twitch anao mandritra ny streaming
ny fomba fanafoanana ny fampisehoana amin'ny fotoana rehetra